Aduunka weli kama dhamaan dadka uu damiirkooda bani‘ aadanimo nool yahay. – Xeernews24
Aduunka weli kama dhamaan dadka uu damiirkooda bani‘ aadanimo nool yahay.
24. März 2019 /in Qormooyin/Articles /von admin
Bishan March ee aanu ku jirno bartamaheedii ayaa laba Masjid oo ku yaala Magaalada Christchurch ee dalka New Zealand waxaa ka dhacay weerar argagaxisinimo ah halkaas oo dad muslimiin ah oo 50 qof ka badan oo salaada Jimcaha tukanayey uu ku laayey nin cadaan xagjir ah oo naceyb u qaadey muslimiinta iyo dadka soo galootiga ah isagoo sidoo kale dad kale ku dhaawacay weerarkaas bahalnimada ahaa.
1.Markii ugu horaysay ee ay hadashay waxa ay dadka ku salaantay salaanta islaamka ka dibna waxay ku tiri iyada oo la hadlaysa muslimiinta wadanku waa wadankinii idinkaa leh kumana tihiin qaxooti dhibta dhacdayna waanu idinla qabnaa oo dhamaanteenba waynu wada murugeysanahay waxaana ay booqatay dadkii dhibana iyada oo xiran xijaab.
2.waxa ay ugu yeertay dhibtii meesha ka dhacday in ay ahayd ficil argagixiso taasoo filan waa ku noqotay dhamaan cusunsuriyiinti caalamka iyo madaxda reer galbeedka ee ku hadaaqi jiray marka ficiladan oo kale ay dhacaan qofka weerarka gaystay waa qof madaxa looga jiro ama waalan iyadoo hadii uu muslim yahayna u haysta shaabada wayn ee dhahaysa waa muslim argagixiso ah.
4.waxa ay balan qaaday in la soo rogayo qaanuun lagu xakameeynayo hubka qaybihiisa kala duwan taas oo ah arin muhiima ayna ku dhiiratay iyadu halka wadamo badan oo kale ku dhici kari waayeen.
5.waxa ay si kal iyo laaba u soo dhawaysay dadka muslimiinta ah iyada oo xijaaban murugo badanina wajigeeda ka muuqato,waxaana markii ugu horaysay taariikhda kulankii baarlamaanka dalka New Zealand lagu furay quraan kariimka ah waxaana ka soo qayb galay dad badan oo muslimiin ah kulankaas baarlamaanka.
6.waxa ay u balan qaaday dhamaan dadka dhiban in ay wax walba la garab tagan tahay oo ay dawladu bixinayso dhaqaalaha ku baxaya qofkii raba in maydka loogu aaso wadankii uu ka so jeeday looguna qaadi doono.
7.waxa ay damaanad qaaday amaanka dhamaan masaajida islaamka iyo meelaha muslimiintu ku kulmaan oo dhan.
Jimcahii iyo New Zealand
Maalintii Jimcahii aanu soo dhaafney dadka reer New Zealand waxa ay ku jumcaysteen meel u dhow masjidu nuur iyaga oo dhamaan haweenka dalkaas u dhashay ee muslimka aheyn ay wada xijaabnaayeen iyagoo ku ixtiraamaya islaamka.
2. Ra’iisal wasaare damiirkeeda bani‘ aadanimo uu noolyahay…
Qalinkii: Eng Samaale Mo Somaali
Madaxwayne Mustaf Cagjar iyo Axmed Shide oo mar kale Khilaaf cusub ka dhex ... XOG: Saraakiil loo Xidhay Weerarkii Shalay iyo Sirdoonka oo Su’aalo weydi...